Ubuntu MATE kana ikashandisa MIR uye kwete Wayland mune yayo yemberi vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pemapurojekiti akasiyiwa Ubuntu padivi paive neMIR, inozivikanwa graphical server iyo yaida kutsiva X.Org uye ive imwezve sarudzo neWayland. Pakupedzisira Ubuntu, sekuparadzaniswa kukuru kweGnu / Linux, ichasarudza kushandisa iyo Wayland server, asi hachisi chinhu chichaitika mune ese epamutemo Ubuntu flavour.
Imwe yemavhenekeri epamutemo yakasarudza MIR, Canonical's inopokana giraidhi server. Iyi sevha ichave mune yemberi shanduro, kwete kusarudza Wayland uye kubatsira mukuvandudza MIR, sezvakaratidzwa nemutungamiri weprojekti.
Ubuntu MATE ichave iyo yepamutemo flavour yandinosarudza MIR. Chikonzero chesarudzo iyi chakatwasuka uye chiri nyore. Kubudirira kwaWayland kweMATE uye mamaneja ayo ewindo kuchiri kwakanyanya kukosha. Kugadziridza zvese zvinodiwa kuWayland raizove basa rakakura kwazvo kuboka reUbuntu MATE, chimwe chinhu chisiri icho neMIR, iyo, oddly zvakakwana, yakawedzera rutsigiro rweMATE kupfuura Wayland. Ndosaka MIR yakasarudzwa kwete Wayland.
MIR ichaenderera nekuve nerutsigiro nekusimudzira nekuda kweUbuntu MATE
MIR mune ino kesi ichave ari pamusoro pezvese inoenderana dura pakati pemaneja wewindows neLinux kernel. Maitiro akakosha nekuti ichave iri chikonzero chekuti MATE anoshanda nemazvo kana kwete. Martin Wimpress akasimbisa iyi sarudzo zvakare sepfungwa yekuenderera pamwe nekuvandudzwa kweMIR, budiriro yakave yakatsaurwa padiki neCanonical. Izvi hazvireve kuti mumwedzi kana muhafu yegore tichava neyakagadzika uye yekupedzisira vhezheni yeMIR, asi zvinoreva kuti budiriro ichaenderera uye MIR inogona kupedzisira iri graphical server yekuparadzirwa kweGnu / Linux.
Ini pachangu ndakashamisika nenhau idzi. Kune rimwe divi iri chinopesana kuti MIR akazvarwa nekuti kukura kweWayland kwainonoka. Izvi zvakaita kuti vazhinji venharaunda yemahara vatore chikamu mukuvandudza kweWayland; mwedzi yakati gare gare Wayland akapfuura MIR se graphic server. Uye zvakare, Canonical "yakakurudzira" ichishandisa MIR mumavhenekeri epamutemo, chimwe chinhu chakakonzera gakava mukati mevhenekeri zvepamutemo nekuti vakasarudza Wayland. Uye ikozvino kana Canonical yaenda kuWayland, Ubuntu MATE inosarudza MIR. Muchidimbu, MIR inogara yakakomberedzwa nemakakatanwa, gakava risingabatsire kusimudzira, kunyange izvi zvingachinja zvakanyanya, haufunge?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu MATE inoshandisa MIR uye kwete Wayland mune yayo yemberi vhezheni
Iwe wakanganisa, MIR iri kuenda kunotaura naWayland.
Ivo vari kungo tora iyo MIR windows maneja uye kuibatanidza neiyo Wayland protocol.
Mubvunzo ndewekuti pachave neMATE neWayland mune kumwe kugovera.
Zvinorevei kuti vanoenderera neMIR yakatadza nedhesiki diki?
KeePassXC 2.2.0 inowedzera yakasimba password jenareta